Aoka ho olona manana kintana!
Reebok dia manasa ny tsirairay ho any amin'ny kilasy fanatanjahan-tena! Azonao atao ary tokony hanatsara ny tenanao sy ny tenanao ary na aiza na aiza. Ny fonosinay dia ny Gym dia eny rehetra eny! Amboary ny hevitrao momba ny fiofanana. Ny fomba fiasa tsy miovaova amin'ny fitafy dia manakana haingana ny olona iray amin'ny fitaomam-panahy sy ny antony manosika. Fantatsika ny fomba hahatonga ny fandefasana ampahany amin'ny fiainanao. Ny kilasy mahomby dia fanomezana sarobidy ho an'ny tena. Fahatokisana, fahasalamana ary fanantenana. Fitness dia lamaody, fitia mahafinaritra, mahasoa ary mampientanentana. Andramo izany, ary tsy te hijanona ianao!
Ataovy miaraka aminay izany ary ho lasa tsara indrindra amin'ny tenanao!
Ny tsara indrindra amin'ireo mpanazatra tsara fanahy dia hanampy anao amin'izany miaraka amin'ireo kintana fanta-daza momba ny horonam-peo, mozika ary aseho an-tsarimihetsika, izay mizara ny hevitra hoe tsy hisy ny fahombiazana marina raha tsy misy fanatsarana ara-batana, ara-panahy sy ara-tsaina.
Fanokafana ny vanim-potoana 2016, 16 Aprily, DI Telegraph
Fanangonana vahiny sy fanombohan'ny fisoratana anarana amin'ny 13:00. Manomboka amin'ny 14:00 isika!
Adiresy: TVERSKAYA street, 7 taona
Amin'ity lohataona ity isika dia mitaky ny tsirairay amin'ny angovo dihy sy mozika mivantana!
13: 00-14: 00 Fanangonana vahiny sy mozika miaina avy amin'ny trio VOUGAL
Ny tetikasa Vougal dia sombin-tantara an-tsehatr'i St. Petersburg izay milalao pôpika amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny teny. Ny sangan'asany voalohany mitondra ny lohateny dia voarakitra ao amin'ny Studio tokana Tokyorama ao Ljubljana, Slovenia. Ny mpamokatra feo sy ny mpandrindra ny rakikiran'ilay rakikira dia nataon'ilay mpanohana an'i nu-disco Sari Havlicek (Sare Havlicek).
Fomban'ny mozika: intelligent-pop (fifangaroan'ny dihy mozika amin'ny 90's, pop-hooks avy amin'ireo raki-tsarobidin'ny 80 sy gitara an'ny taona 70.
14: 00-14: 15 Fanambarana misokatra avy amin'ny hetsika lehiben'ny Elena Letuchiy
Ny fahitalavitra Rosiana, ny mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, ny mpamokatra ary ny talen'ny Elena Letuchaya no lasa fananganana ny "Justice Fair" mandeha manerana an'i Rosia miaraka amin'ny fandaharana "Revizorro" amin'ny fahitalavitra "Zoma!". Ny hatsaran-tarehiny sy ny fahatokisan-tena dia tsy fanomezana voajanahary fotsiny, fa fiasa ara-dalàna, fialam-boly mahasoa sy sakafo mahasoa. Ny fijerin'ity ankizivavy tsara tarehy ity dia mahatonga anao hampitombo sy hanaraka ny ohatra nasehony!
14: 15-15: 15 Shebama miaraka amin'i Valeria Lenovitskaya
Mpampianatra azo antoka avy amin'ny fandaharana iraisam-pirenena Les Mills - Valery Lenovitskaya dia mampahafantatra ny mpandray anjara antsika amin'ny fampiofanana an'i Sh'bam. SH'BAM no fomba tsara hahazoana endrika ary avelao hambara ny talentanao ao anatiny na dia tsy fialamboly aza ny dihy! Ireo kilasy dia manampy amin'ny fanondranana tavy tsy ho fampihetseham-pihetseham-po, hanatsarana ny fandrindrana ary hampianatra mozika dihy lamaody. Tsy vitan'ny hoe mampiofana, fa mifampiresaka amin'ny dihy iray hafa amin'ny dihy iraisam-pirenena. Fampiofanana momba ity fandaharam-potoana ity noho ny fihenan'ny fiakarana avo lenta sy ny hery midina dia manamora ny fiaretan'ny kardinoa sy ny fifaliana!
15: 15-16: 15 Mpianatra kilasy avy any Mikhail Shabanov
Teraka tamin'ny 11 aprily 1986 tao amin'ny tanànan'i Voronezh i Mikhail. Universal Professional Dancer. Ny endriny dihy - Modern and hip-hop. Nanomboka nandihy izy tamin'izy enin-taona. Nandritra ny 8 taona dia izy no solontenan'ny nahafatesany nandritra ny fampisehoana, Ballet Alla Dukhova. Ampianarina any amin'ny sekoly-studio "Fahafatesana" isan-karazany sy lamin'ny dihy. Nanomboka tamin'ny dihy fisakafoana izy, nirotsaka an-tsehatra nandritra ny 7 taona. Nahazo mari-boninahitra avy amin'ny sekolin'ny sarimihetsika Voronezh, nampianarina tany amin'ny sekoly dihy isan-karazany ary nitsidika ny vondrona klasika manerantany. Mpikambana ao amin'ny dihy malaza Dances izy. Ny fandaharam-pianarana maoderina dia natokana nandritra ny 60 minitra ary mety ho an'ny mpandray anjara samy hafa fiofanana. Ny kilasy maoderina dia hanampy anao hitazona ny karazana hetsika dihy, hanamboatra tsikombakomba maro samihafa amin'ny feon-kira mozika isan-karazany, mba hahatsapa ny fahatokisana amin'ny dihy dihy amin'ny ho avy.
16:15 - 16:30 fifaninanana an'ny mpandray anjara avy amin'i Mikhail Shabanov miaraka amin'ny fampisehoana loka avy amin'i Reebok
16:30 - 17:00 Fiarahabana fialan-tsasatra
Miara-miaraka amintsika amin'ity takariva ity ny mpihira Olga Shelest, Artem Korolyov, Polina Maksimova, Ekaterina Volkova (horonantsary TV Voronin), Nastya Krainova ary maro hafa.
Plus - plus! Fampiofanana «Reebok MAN WITH STARS» no fomba tsara indrindra ahafahanao ho lasa ampahany amin'ny fiainanao! Raha efa niova zavatra nandritra ny fotoana ela ianao, dia tonga ny andronao. Ampitao ny fivoaran'ny evolisiona ara-pahasalamana ary ho lasa lehilahy iray amin'i Reebok!
Ny fandraisana anjara amin'ny fampiofanana rehetra dia «maimaim-poana ny« REBOK MAN WITH STARS »! Miangavy fotsiny ny fisehoan-javatra *, mahazo fanamafisana, manontania izany ary ento miaraka aminao.
Manicure amin'ny beige tonony
Make-up ho an'ny grady 2016 ho an'ny maso mena
Separate kiraro ho an'ny feno 2013
Fikirakirana lamaody 2015
Ny halavan'ny lamaody 2014
Ekaterina Smolina - akanjo
Famolavolana ny fantsika amin'ny sparkles - ny hevitra tsara indrindra sy ny fironana farany amin'ny manikira miaraka amin'ny sparkles
Trends amin'ny fararano 2014
Ny fironana vaovao amin'ny lamaody - fararano-ririnina 2016
Sakafo - Summer 2016
Ahoana ny fomba hanaovana volo?
Ahoana no hanesorana ny fametahana amin'ny rantsantanana?
Biby katsaka amin'ny henan-tany
Kanto-studio ao amin'ny tranon'olon-tsotra
12 tsiambaratelo avy amin'ny modely sy ny mpaka sary: ​​ahoana no ahafahana manao saripika tsara tarehy?
Chorba - recipe
Ceres - zava-misy mahaliana momba ny andriamanibavin'ny fahaterahana
Ahoana ny fomba hanamboarana brôtô-kibo goavam-be vita amin'ny rongony fingotra?
Fampahafantarana momba ny fahavokarana
Vehivavy Winter Park Jacket
Ny fiainan'i Rachel McAdams mpilalao sarimihetsika
Ahoana ny fomba hiserana ny zaza iray amin'ny tavoahangy iray?
Karatra bevohoka - rehefa avoaka?
Risotto - fomba fitsaboana sakafo italiana mahafinaritra
Home weather station - ahoana no safidy?
Toro-masoandro manondro andro
Billy Bob Thornton sy Angelina Jolie
Fanafody ho an'ny herpes amin'ny molotra